Kwete Apple chete inotengesa tambo dzeKudada kweApple Watch | Ndinobva mac
Kwete Apple chete inotengesa tambo dzeKudada kweApple Watch
Mazuva mashoma apfuura takakuudza kuti Apple yainge yatengesa, yePride 2017, yemhando yakasungwa tambo modhi yeApple Watch. Iyo yakasarudzika yakasarudzika yekusimbisa zviri kuitwa nematanho e LGTB mumaguta mazhinji. Munguva dzatiri kurarama madziri kunyangwe isu tichitenda kuti nyaya iyi yese inogamuchirwaPachine nyika mune iyo yakapusa chokwadi yekuti mukomana anotsvoda mumwe zvakafanana nekumuuraya.
Apple yakagara yakazvipira mukusiyana kwetsika uye nokudaro ichigamuchira yega uye yega mamiriro ezvinhu evashandi vayo pamwe nevateveri vayo. Uchapupu hweizvi ndohwekuti Ivo vanoisa mari mune aya marudzi ezviratidziro uye izvozvi zvakare vanoisa pakutengesa tambo ine mavara kune yavo wachi.
Zvakanaka, kana iwe waifunga kuti Apple ndiyo yega inofunga nezvazvo, ichikomberedza mambure zvishoma ini ndakakwanisa kuona kuti sei muAliexpress portal Kune zvekare vatengesi vemabhande akafanana, angangoita akafanana nepfungwa inokurudzirwa naApple.
Mune ino kesi, mabhanhire akagadzirwawo neyiloni uye anoratidzira akasiyana mapatani, pakati payo atinogona kuona akawanda-mavara. Mutengo waro unongova 7,90 euros uye ndezvekuti vavaisa kuna 48% kuderedzwa. Pasina kupokana iyo yakanaka kwazvo sarudzo kana iwe uchida kunakidzwa netambo tambo kune yako Apple Watch Uye haugone kushandisa zvinokumbirwa neApple kune imwe yekutanga.
Tinokukurudzira kuti utore iyo webhu yatinobatanidza kwauri uye kana uchida kupera kwavo, bvunza vaunoda zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kwete Apple chete inotengesa tambo dzeKudada kweApple Watch
Super DVD Musiki, yemahara kwenguva shoma
Muongorori Gene Munster anofanotaura kutengesa kwepamusoro kweAirPods pane Apple Watch